U-Semalt Uxelela Ngeyona Inamandla Yiphakheji R R Kwi-Website Scraping
I-RCrawler inesistim esinamandla esisebenzayo zombini ) kunye nokukhwela ngexesha elinye. I-RCrawler yiphakheji ye-R equkethe iimpawu ezibukhali ezifana nokufumana umxholo ophindiwe kunye nokukhishwa kwedatha. Ithuluza le-web scraping linikeza ezinye iinkonzo ezifana nokucoca idatha kunye nokuchithwa kwewebhu.
Idatha ehlelwe kakuhle kunye neyobhaliweyo kunzima ukuyifumana. Inani elikhulu leenkcukacha ezifumaneka kwi-Intanethi nakwiwebhusayithi zifumaneka kwiifom ezingafundiwe. Le yilapho isofthiwe yeRCrawler ifika khona. Iphakheji ye-RCrawler yenzelwe ukuhambisa iziphumo ezizinzileyo kwimvelo. Isofthiwe isebenza zombini kunye nokukhwela ngexesha elifanayo.
Kutheni i-web ikraba?
Kubaqalayo, ukuchithwa kwemibono yewebhu yinkqubo enenjongo yokuqokelela ulwazi oluvela kwiinkcukacha ezifumaneka kwi-intanethi. Imigodi yewebhu ibandakanywe kwiindidi ezintathu ezibandakanya:
Imayini yomxholo wewebhu
Ukubambiswa komxholo wewebhu kubandakanya ukukhutshwa kolwazi oluncedo oluvela kwi-26 scrape site .
I-Web structure mining
Kwi-web structure yommbiwa, iipateni phakathi kwamaphepha zichithwa kwaye zinikezelwe njengegrafu ecacileyo apho amanqindi amele Amaphepha kunye nemiphetho imele izixhumanisi.
Imigodi yokusetyenziswa kwewebhu
Ukusetyenziswa kweemigodi yokusetyenziswa kwewebhu kugxile ekuqondeni ukuziphatha komsebenzisi ekupheleni kweso sihlandlo.
Ziziphi ii-crawlers zewebhu?
Eyaziwa ngokuba njengezigulane, i-web crawlers iiprogram ezizenzekelayo zikhupha idatha kumaphepha ewebhu ngokulandela i-hyperlink ekhethekileyo. Kwimigodi yewebhu, abakwa-web crawlers bachazwa ngemisebenzi abayenzayo. Ngokomzekelo, abakhweli abakhethiweyo bajolise kwisihloko esithile kwigama eliya. Xa kuboniswa, abakwa-web crawlers badlala indima ebalulekileyo ngokuncedisa iinjinjini zokukhangela amakhaya ewebhu..
Kwiimeko ezininzi, abaqhawuli bewebhu bajolise ekuqokeleleleni ulwazi kwiphepha lewebhu. Nangona kunjalo, i-web crawler ekhupha idatha esuka kwisiza se-scrape ngexesha lokukhwela isetyenziswe njenge-web scraper. Ukuba yi-crawler ene-multi-threaded, i-RCrawler ikhupha umxholo njengemethadatha kunye nezihloko zenza amaphepha ewebhu.
Kutheni i-RCrawler iphakheji?
Kwi-mining web, ukufumanisa nokuqokelela ulwazi oluncedo kukho konke okubalulekileyo. I-RCrawler isofthiwe esinceda i-webmasters kwimigodi yewebhu kunye nokucwangciswa kwedatha. Iprojekti yeRCrawler iquka iiphakheji ze-R ezifana:
kwii-URL ezithile. Ukuqokelela idatha usebenzisa le phakheji, kuya kufuneka unikezele ii-URL ezithile. Kwiimeko ezininzi, abasebenzisi bokugqibela baxhomekeke kwizixhobo zangaphandle zokucoca ukuhlalutya idatha. Ngenxa yoko, iiphakheji ze-R zinconywa ukuba zisetyenziswe kwimeko ye-R. Nangona kunjalo, ukuba iqela lakho lokukrazula lihlala kwii-URL ezithile, cinga ukunika iRCrawler ibhola.
Iiphakheji zokuvuna kunye ne-ScrapeR zifuna ukubonelelwa kwee-URL zesikhangiso sendawo kwangaphambili. Ngenhlanhla, i-tm.plugin.webmining iphakheji inokufumana ngokukhawuleza uludwe lwee-URL kwiifom ze-JSON kunye ne-XML. I-RCrawler isetyenziswa ngokubanzi ngabaphandi ukuba bafumane ulwazi olululwazi lwezesayensi. Nangona kunjalo, isofthiwe ikhuthazwa kuphela kubaphandi abasebenza kwi-R.
Ezinye iinjongo neemfuno ziqhuba impumelelo yeRCrawler. Iimpawu eziyimfuneko ezilawula indlela i-RCrawler isebenze ngayo:
Ukuzinzelela - I-RCrawler ineenketho zokwenza izinto ezifana nokujongwa kwezobunzulu kunye neenkcukacha.
Ukulinganisa - I-RCrawler yiphakheji ethatha ukudluliselwa kwi-akhawunti ukuze kube ngcono ukusebenza.
Ukusebenza kakuhle - Iphakheji isebenza ekufumaneni umxholo ophindiweyo kwaye igwebe izibatha zokukhahlela.
R-bomthonyama - RCrawler ngokufanelekileyo uxhasa ukukhwa kwewebhu nokukhwela kwi-R.
Ukunyaniseka - I-RCrawler iyindawo e-based-R egcina imiyalelo xa ihambisa iphepha lewebhu.
I-RCrawler akungabazeki ukuba enye yeprojekti yokuqhawula ngokugqithiseleyo inika izixhobo ezisisiseko ezifana nokucutshungulwa kwamaninzi, ukuxilongwa kwe-HTML kunye nokucoca ikhonkco. I-RCrawler ibona lula ukuphindaphinda, umceli mngeni ojongene nesayithi kunye neendawo ezinamandla. Ukuba usebenza kwizakhiwo zolawulo lweedatha, i-RCrawler ibalulekile ukuqikelela.